Qoor Qoor oo odayaasha Dhuusamareeb u sheegay in uusan u heyn ciidamo ka difaaca Al-Shabaab | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Qoor Qoor oo odayaasha Dhuusamareeb u sheegay in uusan u heyn ciidamo...
Qoor Qoor oo odayaasha Dhuusamareeb u sheegay in uusan u heyn ciidamo ka difaaca Al-Shabaab
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa qiray in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkiisa ay qarka u saarantahay inay Al-Shabaab qabsadaan, maamulkiisana uusan awoodin inuu ka difaaco.
Hadalkaan Qoor Qoor waxa uu ka sheegay kulan uu la yeeshay odayaasha dhaqanka magaalada Dhuusamareeb
Odaaysha la kulmay Qoor Qoor waxay kala hadlayeen khilaaf ka taagan awood qeybsiga golaha deegaanka ee magaalada Dhuusamreeb, balse waxay isku dayeen in kulankaas ay uga faa’iideystaan ka hadalka ammaanka faraha ka siibaxaya ee deegaanada Galmudug, gaar ahaa Dhuusamareeb oo habeen kasta deegaanada u dhaw ay Al-Shabaab yimaadaan.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa odayaasha u sheegay inuu la socdo in gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug ay soo buux dhaafiyeen Al-Shabaab, balse Galmudug aysan heysan ciidan lagu tasha karo oo iska dhiciya Al-Shabaab. Waxuuna odayaashii u yimid ee Dhuusamareeb ka soo jeeday u sheegay in deegaanka ay ka difaacdaan Al-Shabaab, maadaama uusan maamulkiisu laheyn ciidan difaaca.
Intaas kadib odayaasha oo ka carooday jawaabta Qoor Qoor, ayaa u sheegay in sanad ka hor markii uu xilka qabtay aysan Al-Shabaab ka sokeyn Ceelbuur, balse maanta aysan waxaba la aheyn inay qabsadaan Dhuusamareeb, difaacuna uu yahay mas’uuliyad saran maamulka.
Qaar ka mid ah odayaasha oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen, in markii halkaas la kala taagan yahay kulankii lagu kala dareeray, isla markaana uu ku sii batay walaaca ay ka qabaan xaaladda ammaan ee deegaanadooda.
Maqaal horeDowladda Soomaaliya oo meel kale u wareejisay Ciidamadii lagu qabtay dagaalkii Beled-Xaawo
Maqaal XigaMaamulka K/Galbeed oo sheegay inay dileen Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab